प्रदेश-३ को राजधानीः १३ जिल्लामध्ये मकवानपुरका सांसद मात्रै हेटौँडाको पक्षमा | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रदेश-३ को राजधानीः १३ जिल्लामध्ये मकवानपुरका सांसद मात्रै हेटौँडाको पक्षमा
प्रदेश-३ को राजधानीः १३ जिल्लामध्ये मकवानपुरका सांसद मात्रै हेटौँडाको पक्षमा
माघ २१ गते, २०७४ - ०७:४०
काठमाडाैं । सरकारले प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटाैँडा तोकिसकेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक १८ माघमा बसिसकेको छ । पहिलो अधिवेशनमा कांग्रेस सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँबाहेक अन्य सांसदले राजधानीको विषयमा केही बोलेनन् । तर, अहिले राजधानी यहीँ राख्ने कि सार्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । कांग्रेस सांसद बानियाँले हेटौँडा प्रादेशिक राजधानी नभए संघीयता नै कार्यान्वयन नहुने चेतावनी दिएका थिए ।
अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-७ माघमा प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकमा प्रादेशिक राजधानीको विषय पेचिलो रूपमा उठ्ने देखिएको छ । मकवानपुरबाहेक १२ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सांसद हेटौँडाप्रति सकारात्मक नदेखिएपछि राजधानीको विषयमा छलफल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । हेटौँडा राजधानी बनाउने विषयमा चितवनले पूर्णरूपमा साथ दिने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले चितवनका सांसदहरूले पनि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । यदि चितवनले साथ नदिएमा हेटौँडा राजधानी बनाउन दुई तिहाइ सांसद पु¥याउन गाह्रो देखिएको छ । प्रदेश ३ मा कुल ११० सांसद छन् । पछिल्लो समय सबै जिल्लालाई पायक पर्नेगरी भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेमध्ये एक ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने विचार आउन थालेका छन् ।
चितवन ३ (क) का सांसद कृष्ण भुर्तेलले प्रदेश राजधानी हेटौँडा नै उपयुक्त हुने बताए । रसुवा, सिन्धुपाल्चोकदेखि आउने मानिसका लागि केही अपायक देखिए पनि पूर्वाधार विकाससँगै सबै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
चितवन ३ (ख) का सांसद रामलाल महतोले प्रदेश राजधानी कहाँ भन्ने विषय प्रदेश सभाको दुई तिहाइले टुंगो लगाउने भन्दै आफूले चितवन, हेटौँडा वा अन्य कुनै ठाउँको नाम नलिने बताए ।
वाम गठबन्धनको सरकारले राजधानी सार्ला ?
प्रदेश राजधानी कांग्रेस सरकारले कमल थापाको पहलमा हेटौँडामा तोकेको हो । यदि चाँडै बन्ने वाम गठबन्धन सरकारले राजधानी सारे मकवानपुर र चितवनको जनमत गुम्न सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । मकवानपुर वाम गठबन्धनको पकड जिल्ला मानिन्छ । २०५१ सालमा मकवानपुरमा एक सिट राप्रपाबाहेक सबै निर्वाचन क्षेत्र तथा २०५६ सालमा एमालेले सबै क्षेत्र जितेको थियो । २०६४ मा सबै क्षेत्र माओवादी, २०७० सालमा एक सिट कांग्रेसबाहेक सबै एमाले र २०७४ सालमा सबै वाम गठबन्धनले जितेको छ ।
डेरा नखोजी सांसदहरू काठमाडौं फर्किए
प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन १८ माघमा तोकिएकाले सबै दलका सांसद हेटौँडा आएका थिए । कांग्रेस–एमालेका केही सांसद अघिल्लो दिन आएर होटल, नेता तथा कार्यकर्ताको घरमा बसेका थिए । तर, पहिलो अधिवेशन सकिएकै दिन अधिकांश सांसद राजधानी फर्किए । पुनः अर्को बैठक बस्ने भएपछि सांसदहरूले हेटौँडामा डेरा खोज्नुपर्ने हो । तर, प्रदेश ३ का अधिकांश सांसद डेरा नखोजी काठमाडौं फर्किसकेका छन् । प्रदेश ३ का अधिकांश सांसदलाई हेटौँडा स्थायी राजधानी कायम हुनेमा ढुक्क छैनन् । पहिलो अधिवेशनले २७ माघमा सभामुख चयन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसपछि नियमित रूपमा उपभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रिमण्डल गठन हुने भएपछि अधिकांश सांसद पार्टीका शीर्ष नेता रिझाउन काठमाडौं पुगेका छन् ।
के भन्छन् सांसद ?
हेटौँडा राजधानी उपयुक्त छैन
अष्टलक्ष्मी शाक्य, सांसद, एमाले
हेटौँडा प्रदेश ३ को राजधानी बन्न भौगोलिक बनावटले धोका दिएको छ । १३ मध्ये बढीमा ६ जिल्लालाई मात्र मकवानपुर पायक पर्ने देखिन्छ । यसैले पनि हेटौँडा प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त छैन । रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, रामेछापजस्ता विकट जिल्लाका लागि हेटौँडा शतप्रतिशत अनुपयुक्त छ र केन्द्रमा छैन ।
राजधानी सार्ने प्रस्तावमा जनमतसंग्रह हुन्छ
इन्द्रबहादुर बानियाँ, सांसद, कांग्रेस
हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त ठहर भएपछि सरकारले हेटौँडालाई राजधानी तोकेको हो । सांसदले भनेर मात्र राजधानी सार्न मिल्दैन, परिआएमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ । जनताको मन जितिसकेको हेटाैँडाबाट राजधानी सार्न त्यति सजिलो छैन । संसद्भित्र जस्ता सवाल उठे पनि आमजनताले हेटौँडालाई राजधानी स्वीकार गरिसकेका छन् । सुरक्षा, भौतिक संरचना र दर्जनौँ सडक सञ्जालले हेटाैँडा उपयुक्त स्थान बनिसकेको छ । यो अवस्थामा संसद्मा राजधानी सार्ने प्रस्ताव ल्याउनु नै गलत हुन्छ ।
विकेन्द्रीकरणका लागि हेटौँडाको विकल्प छैन
मनु सिग्देल, सांसद, एमाले
हामी संविधान कार्यान्वयनसँगै संघीयताको अभ्यासमा छौँ । यसकारण पनि हेटौँडा राजधानीको विकल्प छैन । संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण हो । सरकारले हेटौँडालाई हरेक क्षेत्रबाट उपयुक्त ठानेर राजधानी तोकेको छ । केन्द्रीय राजधानी वरपर राजधानी राख्नु बिल्कुल गलत हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयका लागि पनि हेटौँडालाई स्थायी राजधानी बनाएर यहाँका स्रोतसाधनलाई भरपुर प्रयोग गरेर प्रदेशलाई विकसित र समृद्ध बनाउनुपर्छ । अस्थायी राजधानी तोकेपछि सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारसँगै संसद् सञ्चालनका लागि समेत सबै तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा फेरि राजधानी सार्नु मूर्खता हो ।
राजधानीको विषय ओझेलमा परेको छ
शालिकराम जमरकटेल, सांसद, माओवादी
राजधानी स्थायी गर्ने वा सार्ने विषयमा संसद्भित्र र बाहिर कतै पनि छलफल चलेको छैन । छलफलको विषय नबने पनि हेटौँडा प्रदेश ३ को राजधानीका लागि उपयुक्त छ । भौतिक संरचना र सडक सञ्जाललाई मात्र मुख्य मान्ने हो भने हेटौँडाको विकल्प छैन । केही जिल्लाका लागि अपायक पर्ने भए पनि सडक सञ्जालले जनतालाई थप सहज बनाउने छ । राजधानी सार्ने विषयभन्दा संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकार गठन मुख्य एजेन्डा बनेको छ । १३ मध्ये सात जिल्लाबाट पायक पर्ने हेटाौँडा पुरानै क्षेत्रीय मुकाम भएकाले पनि स्थायी राजधानी तोकिनुपर्छ ।
राजधानीको विषयमा बखेडा बनाउनु अर्थहीन
कुमारी मोक्तान, सांसद, माओवादी
हेटौँडाबाट राजधानी सार्ने सवाल नै उठ्दैन । भौगोलिक बनावटकै निहुँ बनाएर राजधानीको विषयमा बखेडा बनाउनु अर्थहीन कुरा हो । हरेक क्षेत्रले सम्पन्न हेटौँडालाई स्थायी राजधानी बनाउनुको विकल्प छैन । सडक सञ्जालले हेटौँडालाई देशकै केन्द्रबिन्दु बनाइसकेको अवस्थामा राजधानी तोकिएको हो ।
माघ २१ गते, २०७४ - ०७:४० मा प्रकाशित